Cafe "Ritz" e Voronezh, etholakala eduze emaphethelweni omuzi, budonsa izivakashi ingasese layo (kude womgwaqo), omkhulu isikhala elingaphakathi, ukukhanya ingaphakathi, cuisine esiphundu futhi ngamanani ezifanele.
Voronezh - ngempela idolobha elikhulu WaseRussia. Itholakala ingxenye yayo European - kokubili i loMfula i-Voronezh Reservoir.
Lena esifundeni ezinkulu zomlando namasiko nezezimboni yezwe, elinabantu izakhamuzi ezingaphezu kwesigidi.
Umthamo omkhulu, inani elikhulu labantu bagxila ikakhulu enkabeni yedolobha ... Futhi konke lokhu, kubangela bendawo hhayi kuphela ukuphuma once in a ngenkathi kuleli zwe, endaweni ezikude kakhulu. Lapho kukhona kakade kusukela 2013 cafe owaziwa "Ritz", okuyinto ku Moskovsky Prospect, 145-B.
Ngaphakathi Igumbi uqobo futhi muhle kakhulu. Umklamo ubeka inani elikhulu izinto sokhuni zokuhlobisa, okuyinto ngokushesha Ubamba izivakashi iso. Lokhu izakhiwo ugongolo, kanye nokhuni ukubiyela ibala ingilazi nophahla ngaphakathi, ifenisha uqobo.
Uphahla lwangaphakathi emhlophe - ngokwengxenye namabala (ingilazi enombala) umhlobiso ifaka kancane - tensioning ecwebezelayo.
I ukukhanyisa cafe "Ritz" nice kancane ithulisiwe, esiza ukuqinisekisa ukuthi izivakashi bazizwa ezindaweni umoya ngomlingo engaqondakali.
Futhi, ngaphezu ihholo elikhulu, kukhona ongaphandle ithala ehlobo, okuyinto kuhle futhi yothando, ungachitha ubusuku yakho othandekayo, ujabulela nemvelo, isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi futhi birdsong!
Usuku cafe kukhona eziningi imindeni enezingane, abazimisele ukuhamba egcekeni zibabaza eyingqopha wendawo - waterfall elihle.
Imenyu cafe "Ritz" (Voronezh) - bendabuko cuisine Russian futhi Georgian.
Futhi ngenxa yokuthi ungazama lapha njengoba izitsha ozithandayo: izinhlobo ezahlukene salads, ukudla okulula, ashisayo nabandayo, izitsha ngowokuqala ivumelane yonke akuthandayo, side izitsha, nama-dessert okumnandi Georgian shish kebab, kebab, inyama kanye nemifino izitsha okuphekwe phezu evulekile umlilo, khachapuri, iwundlu isobho-umhlakanya nabanye.
Kukhona futhi zigcine iwayini okumnandi. Futhi ukwenza abathandi iziphuzo ukuxegiselwa abe ubhiya okuhle. Itiye, ikhofi, juice.
By endleleni, kukhona imifino kanye amamenyu zezingane.
Lesakhiwo njalo ukwamukela ngesikhathi izivakashi - nsuku zonke, kusukela ngo-12 pm!
Kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kanye cafe ivuliwe kuze kushaye ihora 12 ebusuku nangezimpelasonto kanye namaholidi - kuze kube yilapho omunye ezimpondweni.
Kulabo abafisa ulalele umculo bukhoma nazi abaculi abahlabelela bethi bukhoma. Karaoke. abathandi Dance ungakwazi ukulisebenzisa ku isikhungo kanye lesi sifiso.
Esikhathini cafe "Ritz" e Voronezh Ungase futhi ukugubha imikhosi ehlukahlukene. Amahholo ngenjabulo ihlanganise 30, 50 noma ngaphezulu abantu. Kukhona idili imenyu enkulu yonke ukunambitheka.
Amanani e-cafe "Ritz" (Voronezh) impela ezingabizi futhi eyamukelekayo ngempela. ithikithi Isilinganiso izindawo - ruble mayelana 500, idili - 2000 ruble umuntu ngamunye.
Ngakho Wamukelekile "Ritsu!"
"Diamond Catering" - abadali iholide elikhulu!
Cafe okungajwayelekile e Moscow - isikhala efakazelwe kuphela
Kanjani ukuqamba kabusha ifolda umsebenzisi Windows 7? imiyalelo enemininingwane kanye nezincomo ezibalulekile
Ingabe ngiya njalo ngenyanga ukuze ageze emanzini ageze?
Uba kanjani sexy futhi angenakuvinjwa?